Akwụkwọ mkpesa Amazon, Akwụsịre Akaụntụ Onye Na -ere, Atụmatụ Ime Ihe
Onye na-enye ndụmọdụ gbasara ịrịọ Amazon
Etu esi ede akwukwo oma na akwukwo ozo nke Amazon?
Naanị soro anyị Live Live Chat ugbu a ma ọ bụ mezue akwụkwọ nyocha ịntanetị n'okpuru yana nkọwa gị mgbe ahụ onye ndụmọdụ anyị ga-alaghachi n'otu awa. Kpọtụrụ anyị maka akwụkwọ ozi Amazon chọrọ nkwụsịtụ.
Lelee Ọrụ Anyị
Ghọta Ihe mere eji kwụsịtụrụ Akaụntụ Onye Na -ere Amazon!
Mara ihe kpatara nkwụsịtụ akaụntụ bụ nzọụkwụ mbụ iji megharịa akaụntụ ahụ. Chọpụta nsogbu a chọrọ ọkachamara ọkachamara n'ọhịa. Ndị ọkachamara na ndị na-ere ahịa anyị na-ere ahịa ga-enyere gị aka ịchọta isi ihe kpatara nkwụsị gị ma kọwaa otu anyị nwere ike isi nyere gị aka ide ihe zuru oke Akwụkwọ Ozi Mgbasa Ozi Amazon. Kpọtụrụ anyị ugbu a wee nweta akwụkwọ ASAP gị.
Anyị na-emeghe 24 awa ụbọchị, ụbọchị asaa n’izu.
Tinye akwukwo adighi
Ndị ndụmọdụ ga-alaghachi na 1 Hour
Kedu ka m ga - esi gbochie nkwụsịtụ a na - eme n'ọdịnihu?
Ikwesiri iche echiche nke ọma banyere ya na otu ị ga - esi gbochie nke a ime ọzọ n'ọdịnihu. Amazon ga-atụ anya na ị ga-eme atụmatụ ọ bụla ị ga-eme na oge ụfọdụ ha ga-eweghachi Akaụntụ Ahịa Amazon ozugbo ị nwere ike igosipụta na ị rụzuru atụmatụ ọrụ gị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ enyemaka ịrịọ maka akaụntụ ndị na-ere ahịa nke Amazon, ma ọ bụ n’aka nke ọzọ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe nsogbu gị nke iweghachi bụ, anyị nwere ike inye aka. Soro otu n’ime ndị nnọchianya anyị kwurịtara ka ịnụ ndụmọdụ na ndị ọkachamara n’efu banyere ikpe gị.
Anyị nwekwara ike inyere gị aka ịrịọ ma ọ bụrụ na ndepụta gị agbanyụọ ma ọ bụrụ na ịda iwu nwere ike ịmetụta ahụike gị! Nkata na otu n'ime ndị ahịa anyị na-elekọta ndị nnọchi anya iji nweta ndụmọdụ efu.
weghachite akaụntụ Amazon gị kwụsịtụrụ n'ime awa 24
Ọ bụ ezie na ọ na-ewe obere oge ka ịkwụsịtụ akaụntụ azụmaahịa gị amazon, ịkwụsịghachi akaụntụ ahụ nwere ike ịbụ usoro na-ewe oge. Mgbe ụfọdụ, oge a na-agbatị n'ihi ụfọdụ mmejọ ebe a na onye na-ere ya mere n'ihi ihe dịgasị iche iche dịka enweghị nghọta na amụma nke Amazon, enweghị ike ịchọpụta esemokwu ahụ n'azụ Nkwusi akaụntụ Amazon, ma ọ bụ enweghị ike ide ederede doro anya na ọkachamara Amazon nkwusio akwụkwọ mkpesa. Anyị ghọtara nsogbu ndị a karịa onye ọ bụla na ọ bụ ya mere anyị ji ekwe nkwa ịrụ ọrụ kacha mma n'oge kachasị mma.
Aplus Global eCommerce bụ ihe nkwụsị nkwụsị maka mkpebi zuru oke nke mkpa Mkpegharị gị na ndị ọzọ. Oge nwere ike ịdị site na 24 ruo awa 72 dabere na mgbagwoju anya nke nsogbu ahụ.
Kedu ka m ga -esi kwụsịtụ akaụntụ Amazon m?
Inye mmadụ ego dị mma ma ị nwere ike ị paya ntị na nkwupụta nke Amazon zitere, wee nwee atụmatụ nke ime ihe. Ndị a bụ isi ihe dị mma nke ịrịọ arịrịọ dị mma.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji dee akwụkwọ mkpesa nkwụsịtụ?
Oge kachasị dị mkpirikpi iji dee mkpesa bụ awa 24. Oge a nwere ike ịbawanye ruo ụbọchị azụmahịa 3-4 dị ka nkọwa nke otu amazon kwụsịtụrụ na ụdị ọrụ onye na-ere ya rịọrọ.
Kedu ihe ị ga - eme iji weghachite Akaụntụ Ahịa m Amazon?
Enwere ọrụ na ngwugwu dị iche iche anyị na-enye iji weghachite akaụntụ ahịa ndị Amazon. Anyị na-enye ndụmọdụ, amazon rịọ maka ntinye akwụkwọ yana soro ọrụ; dabere na ụdị ngwugwu ị họrọ.
You rụọlarị ọrụ na Amazon Seller kwụsịtụrụ ikpe?
Eeh, anyi ejirila otutu okwu di iche-iche aru oru Nkwado Akaụntụ Amazon. Ọzọkwa, anyị nwere ndị otu ndị agha lagoro na mpaghara a.
Ọ bụrụ na Amazon rịọ maka ozi ndị ọzọ?
Anyị na-edozi mkpesa ahụ ruo mgbe ọ ruru ihe mgbaru ọsọ ya - nke bụ nkwụghachi. Mgbe odori gị otu ugboro, anyị na-arụ ọrụ ọ bụla obere nke usoro ruo mgbe niile nsogbu e.
Emeghachiri nkwụghachi akaụntụ?
anyị, dịka onye ọlụlụ, na-enye nyocha kachasị mma na ịrịọ arịrịọ maka iweghachi nke akaụntụ amazon a kwụsịtụrụ. Anyị enweghị ike, mana ịchịkwa ihe ndị sitere na njedebe Amazon na nkwụghachi akaụntụ ahụ abụghị 100% ekwe nkwa. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị enweela ihe ịga nke ọma karịa 98% ruo ugbu a.
Anyị na-enye nkwa ịkwụghachi ego?
Anyị adighi anabata ego-azụ mana enwere ike ịnwe ọnọdụ ọhụụ ebe anyị na-atụle ya. Maka ozi ndị ọzọ gụọ usoro nkwụghachi ụgwọ anyị.
Kedu ihe ịga nke ọma gị n na -arụ ọrụ arịrịọ arịrịọ Amazon?
Obi dị anyị ụtọ, Ruo ugbu a, anyị enweela ihe ịga nke ọma karịa ma ọ bụ kwekọrọ na 98%. Anyị na-eme nnukwu ihe ma nwekwa ọnụego njigide 90% maka afọ ojuju ndị ahịa.
Akwụkwọ ozi Amazon Amazon Appeal
Aha ya bụ Dejah Stewart
Emechiri akaụntụ akaụntụ Amazon m, yabụ akpọtụrụ A Plus Global Amazon iji nyere m aka dee atụmatụ m ga-eme iji rịọ mgbaghara ahụ.... Emechara m gaa akaụntụ m ma kwuo okwu ụfọdụ m nọ na-enwe tupu m kwụsị ọrụ. N'ozuzu, ahụmịhe magburu onwe ya, ha nabatara ma jee m na usoro ahụ iji mee ka akaụntụ m dịghachi. Ya mere, ọrụ ha na-arụ ọrụ!GỤKWUO
Mgbe m rutere ịrịọ arịrịọ m, m na-eziga 4-5 POA na enweghị ihu ọma. Anọ m na-eche echiche banyere ịme akaụntụ Amazon ọhụrụ ebe ọ bụ na enweghị m ike ị nweta akaụntụ m. Mara, m ka nwere ego mechiri... na Amazon ma ha agaghi aza azịza ọ bụla m rịọrọ. (site na email ahụ na-asị, "Anyị nwere ike ghara ịzaghachi ozi ịntanetị ndị ọzọ gbasara nsogbu a"). Enwere m ihe egwu ma kwuo na ọ bụ m kwụrụ ha ma nweta akaụntụ m ma na-agba ọsọ ma nwekwaa ego m ma ọ bụ na m akwụ ha ma tufuo ego ma tufuo akaụntụ m na ego ahụ. ụlọ ọrụ nyere m aka iweghachite akaụntụ m. Ha na-ebute POA n'ụzọ nkịtị ma na-esote ụbọchị m nwetara email na-ekwu "Ugbu a akaụntụ Amazon gị amaliteghachila" Ọrụ a mere nke ọma ma ana m atụ aro Aplus Global! mere. Mee ka otu ọkachamara dee gị POA.GỤKWUO
09:27 29 Mee 21
Ha dị mma n’ihe ha na-eme. Eji m ha mee ihe iji nyere aka mee ka ndị na-ere ahịa m Amazon reactivated, ọ were obere oge, mana ha anaghị ada mba na akaụntụ. Ha deere m arịrịọ ruo mgbe m ruru... reactiactive. Ntughari m were ihe dị ka ọnwa 2 na ọkara, mana enwere m enyi nke jiri ọrụ a wee weghachite akaụntụ ya na ụbọchị ole na ole. Ukwuu nwere ike ikwu!GỤKWUO
08:26 05 Mee 21
Obi dị m ezigbo ụtọ iso ha rụọ ọrụ. Ọrụ ngwa ngwa na akwụkwọ mkpesa ha dị ịtụnanya. Guysmụ nwoke a ma amazon chọrọ. Daalụ!!
11:07 03 Mee 21
Mụ na ụlọ ọrụ a arụkọ ọrụ karịa akaụntụ 100 ma ha weghachite ọtụtụ n'ime ha. Ha dị ezigbo mma ọrụ akwụkwọ ozi ịrịọ na nkenke. M ga-anọgide na-arụ ọrụ na ha.
06:17 03 Mee 21
Nnọọ! Achọrọ m ịgwa gị: Enweela m akaụntụ m ọzọ! Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị! Agam echeta gi.
Robert Godinez kwuru
19:24 17 Mee 21
Kacha mma na azụmaahịa. Mgbe m gochara ọrụ ha ma hụ ihe ha mere maka akaụntụ m. Ekwesịrị m ịsị na ekwere m na ọ dịghị ihe ha na-agaghị edozi. Kwadoro ha nye onye ọ bụla nwere nsogbu... na-ere ahịa na akaụntụ. Ngwa ngwa na-ewe ihe na nsonaazụ ngwa ngwa!GỤKWUO
23:34 09 Mee 21
Aga m akwado ụlọ ọrụ a ka ha dee akwụkwọ ozi ọ bụla Amazon rịọrọ ka ha maara ihe Amazon na-achọ. Emere m nyocha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ wee họrọ nke a ebe ọ bụ na ha wepụtara oge ịgwa m okwu... banyere akaụntụ m. Echere m n'ezie na m ga-echere 90 + tinyere ụbọchị iji mee ka m hapụ ego ma kwụsịtụrụ akaụntụ m maka ihe ọma. Daalụ APlusGlobal maka ide akwụkwọ mkpesa m ngwa ngwa na ọkachamara. M ukwuu na-atụ aro iku a ọkachamara oge mbụ ị na-arịọ gị ikpe. Companylọ ọrụ a nyeere m aka ịmaliteghachi akaụntụ m otu ụbọchị ahụ m tinyere akwụkwọ arịrịọ m rịọrọ arịrịọ m. Nke ahaziri m ikpe. Daalụ maka nnukwu ọrụ!GỤKWUO
05:02 07 Mar 21
Ndị mmadụ @ APlus Global Ecommerce dị oke mma ma na-enye aka. Enweela nyocha akaụntụ zuru ezu ma nweta nghọta dị ukwuu n'aka ha gbasara mgbanwe ndị ọ dị mkpa ka eme. Ma maa ihe, ọ... emeziwanyekwa m ahịa mGỤKWUO
04:58 07 Mar 21
APlus Global Ecommerce bụ nnukwu ndị na-eweta ọrụ maka ọrụ ịrịọ Amazon. Enwetara m akaụntụ m n'ime elekere 72 nke mmachibido iwu ahụ.
15:58 06 Mar 21
Aplus Global Ecommerce zọpụtara na elekere 2 wee weghachi ya ozugbo Amazon. Kpamkpam kasị mma. Kwesịrị penny ọ bụla. Ndụmọdụ m anaghị eleba ọnụahịa ọnụahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ nsonaazụ .Ọrụ ya bụ naanị... zuru oke. Mgbe ịzụta nkwurịta okwu bụ ngwa ngwa, M nwere akwụkwọ n'ime 2 awa na acoount wepụtara na-erughị 24 awa. Enwere m akaụntụ ahụ maka ihe karịrị ọnwa 5. Ana m akwado ya.GỤKWUO
18:21 16 Ihihie 21
Enwetaghachila akaụntụ m n'ihe na-erughị awa 24, aga m akwado ya ka onye ọ bụla, kwụsị ịkwụ ụgwọ ndị mmadụ karịrị nke ukwuu ma soro ọdụ́ ọdụ rụọ ọrụ kacha mma mgbe ị na-arịọ arịrịọ! Daalụ nke ukwuu